Beesha Caalamka oo War Ka soo saartay Qodobadii Ka soo baxay shirkii Golaha Amniga.
Beesha caalamka ayaa sheegtay in go’aannadii ugu dambeeyay ee ay gaareen golaha amniga qaranka ay ahaayeen tallaabooyin wax ku ool u ah Soomaaliya.
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, dowladaha Itoobiya, Talyaaniga, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa soo dhoweeyay go’aannadii Golaha Amniga Qaranka ee Soomaaliya (NSC) uu ku qaatay kulankii 6-10 Febraayo 2018.
Golaha Amniga Qaranka (GAQ) wuxuu ka dooday arrimo xasaasi ah sida mas’uuliyadaha amniga, hanaanka doorashada, dib-u-eegista dastuurka iyo qeybsiga kheyraadka iyo dakhliga, oo uu ku jiro kalluumeysiga.
« Alshabaab oo Dhaqaala Badan ka hela deeqa Dowlada Loogu Talagalay.
Alshabaab,, Tababare ciidan ayaan Ku dilnay Muqdisho. »